देशैभरिका बिधालयहरुलाइ नेपाल सरकारबाट भर्खरै आयो अत्यन्तै जरुरी सूचना ! – AB Sansar
September 26, 2020 September 27, 2020 adminLeaveaComment on देशैभरिका बिधालयहरुलाइ नेपाल सरकारबाट भर्खरै आयो अत्यन्तै जरुरी सूचना !
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कोभिड–१९ को जोखिम कायमै रहेकाले केही समय विद्यालय खोल्नुभन्दा वैकल्पिक सिकाइ प्रणालीलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन्। शिक्षा पत्रकार समाजले आज आयोजना गरेको ‘वैकल्पिक सिकाइको कार्यान्वयनमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका’ विषयक भर्चुअल छलफलमा शिक्षालयमा सङ्क्रमण देखिएमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कठिन हुने भएकाले हाललाई सूचना, सञ्चार र प्रविधिको प्रयोगमा आधारित वैकल्पिक प्रणालीमा जोड दिन आग्रह गरे। *** भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***